SQL Server & MS Access Dhizaini yeMarijuana uye Hemp Mabhizinesi
Nezvayakaipira - Custom Development
Ukasatarisa kunze chirongwa chekuvandudza nenzira kwayo, UNOGONA kusawana zvaunoda.
Kana iwe uine yako yekodhi kodhi yakagadzirwa neyakagadzira mumwe mugadziri (uye iye / iye asina kupa zvinyorwa), kugadzirisa kune iripo kodhi kunogona kuve kwakaoma.
Zviri nyore kushandisa… ndakasangana nezvakawanda "zvakaputsika" zvinoshandiswa zvakavakwa nevashandisi vemagetsi nevamwe… vakasvika padanho rekuti hunyanzvi hwavo (kana nguva yekudzidza) zvaisakwanira kuita basa,
Cloud Dhatabhesi Mhinduro
Cloud mhinduro dziri kuve dzakakurumbira, sezvo vachibvumira vashandisi kubata dhata ravo pamusoro peinternet, vachishandisa akawanda madhizaini, vasina kupihwa maseva, nezvimwe kubhizimusi ravo remuno. Mazhinji emhinduro idzi anoda maitiro uye zvimwe zvirongwa, zvakadaro.
Tsika Dhatabhesi Yekuvandudza Solutions
Kunyange zvese Access neExcel zvichigona kugadziridzwa, mazhinji mabhizinesi madiki achasarudza kuenda neyakajairika dhatabhesi mhinduro, nekuda kwedata ravo zvido uye nemabatirwo avanoda kubata, kuongorora nekuparadzira ruzivo. Tsika mhinduro dzinobvumidza mabhizinesi kusarudza yavo chikuva (webhu, desktop, nhare, zvese) uye backend dhatabhesi (SQL Server, MySQL, nezvimwewo)
Pros - Sei Uchishandisa MS Access
Kurumidza kugadzira mafomu, mishumo uye mibvunzo.
Microsoft yaisanganisira akawanda masvikiro ekutungamira kugadzirwa kwemafomu uye mishumo.
Akanaka kwazvo mushumo munyori.
Zvayakanakira - Tsika Dzekusimudzira
Iwe unowana chaizvo izvo zvaunoda. Unogona kumhanya mhinduro pane akawanda mapuratifomu uye matekinoroji, zvichibva pane zvako zvirevo. Une shamwari yekunze (maDBA nemaPurogiramu) anoshanda newe kuona kuti zvese zvinoshanda… ndiko kugona kwavo.
Ini ndagara ndichisangana nevanhu vachishandisa MS Excel yedata manejimendi, uye nepo ichikwanisa kushandira zvidiki zvinyorwa, nezvimwe, kazhinji haina kukodzera kuchengetedza data.
Pros - Nei Uchishandisa MS Excel
Nyore setup uye kushandisa.
Kuongorora kwakavakirwa muExcel.
Zviri nyore kuchengetedza uye kugovera.
Nezvayakaipira - Nei ASI Kushandisa MS Excel
Multi-mushandisi kugona kune mashoma (hongu, UNOGONA kuva nevanhu vanoverengeka vanowana iyo yakafanana faira kamwechete, asi izvi kazhinji harisi zano rakanaka kurekodha kukiya nyaya).
Zvinogona kuve zvakaoma kumisikidza yakasimba data yekupinda mafomu pasina ruzivo rwakanaka rweVBA (Visual Basic yeApplications). Dhata Yekuchengetedza haina kusiyaniswa nekodhi uye kuongorora.
Haikodzeri kukodzera kushandira kumusoro dhata kumaWebhusaiti (kana ichishandiswa sedataource, kwete kungo dhawunirodha link).